Hosoka, tsy fanarahan-dalàna, fihoaram-pefy… : tsy hanaiky ny voka-pifidianana ny Tim, Mapar, MMM, ny Marina | NewsMada
Hosoka, tsy fanarahan-dalàna, fihoaram-pefy… : tsy hanaiky ny voka-pifidianana ny Tim, Mapar, MMM, ny Marina
Tsy afaka ny hangina ka nanambatra ny heriny, omaly ireo kandidà loholona avy amin’ny antoko Tim, ny Mapar, MMM ary ny Marina. Narangarangan’izy ireo tamin’izany ny tranga niseho, mialoha sy nandritra ary taorian’ny fifidianana loholona farany teo. Manoloana izany, tsy eken’izy ireo ny voka-pifidianana.
« Efa vonona ny porofo rehetra. Handeha amin’ny ambaratongam-pitsarana aloha izahay. Fa eo koa ny hetsika ara-politika hatao ka mbola hiverina eto izahay. Aorian’izany, hiditra amin’ny dingana ara-politika. Ho hitantsika eo ny ho tohiny », hoy ireto kandidà maromaro ireto, mivonona ny handeha lavidavitra kokoa tamin’ny mpanao gazety tetsy Antaninarenina.
Notanisain’izy ireo nialoha izany ny tsy fanarahan-dalàna. « Teo ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana sy ny fampiasana fitaovam-panjakana. Ny lisi-pifidianana tsy ara-dalàna. Ny disadisa nampiroaroa saina ny mpifidy sy ny kandidà momba ny birao fandatsaham-bato (BV). Tsy ara-dalàna ny fanomanana », hoy ny kandidàn’ny Mapar, Rakotoson Haja.
Faneriterena sy ny fandrahonana ny kandidà
Notsiahivin’ny kandidàn’ny Tim, Andriamadison Hasina kosa fa tsy tokony ho natao amin’ny fotoam-pahavaratra ny fifidianana ary efa nambaran’izy ireo tamin’ny fotoan’androny izany. « Tsy afaka nifidy ny sasany noho ny fiakaran’ny rano. Maty an-drano ny mpifidy vaventy iray noho io daty nataon’ny Ceni io…Tsy voahaja ny tsiambaratelon’ny fifidianana sy ny fahalalahan’ny safidy. Nandeha avokoa ny faneriterena sy ny fandrahonana, toy ny fanagadrana raha tsy mifidy HVM na koa tsy hahazoan’ny kaominina ny fanampiana na koa fametrahana PDS hitondra ny kaominina», hoy izy. Nanteriny koa fa efa niaiky ny lesoka tamin’ny fifidianana ny Ceni.
Nanamafy izany ny kandidàn’ny MMM, Ratsihoarana Andrimalala, nilaza fa niteraka fiandanian’ireo mpifidy vaventy ny namoahana ny voka-pifidianana mialoha ny amin’ny 5 ora, fotoana tokony hifaranan’ny fifidianana. « Tsy fanao sy tsy fahita maneran-tany izany nefa naheno izany avokoa amin’ny alalan’ny RNM ny rehetra amin’ny filazana fa nandresy ny HVM », hoy izy.
Nahitsy kosa ny kandidàn’ny Marina, Ranaivoson Desiré, naneho fa voahitsakitsaka ny zo fototr’ireo mpifidy vaventy. « Henatra ho an’ny demokrasia sy famonoana ny fahalalahana iny fifidianana iny. Tsy mifanalavitra amin’ny any Korea Aavaratra ny eto amintsika amin’ny fampanjakana ny antoko tokana. Tsy ho hita taratra ny adihevitra… Miafara eny an-dalambe ny demokrasia rehefa atosika any ivelan’ny lapa ny adihevitra », hoy izy.
Haverina ny fifidianana loholona
Teo koa ny fampahatsiahivany ny tranga niseho amin’ny fanerena ny mpifidy, toy ny filazana fa ho vita hatreo ny fampandrosoana ny kaominina rehefa tsy fidina ny HVM. « Lasa heloka ny tsy mifidy azy ireo », hoy ihany izy. Nametraka ahiahy amin’ny ho fifandraisana amin’ny sehatra iraisam-pirenena manoloana izao zava-miseho izao mihitsy ny tenany.
Anisan’ireo tonga nitatitra ny tranga niseho tany Toliara koa ny kandidàn’ny Tim, Naika Eliane, ary naneho ireo marika hita amin’ny biletà tokana. « Noterena avokoa ireo mpifidy hanao izany ka tsy nahagaga raha 100% ny HVM any aminay », hoy izy. Na izany aza, nambarany fa tokony hanao ny asany ny Ceni sy ny HCC ary hanaporofo fa vonona ny hametraka ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana. Ho azy ireo, takiana ny hamerenana ny fifidianana.
Hametraka ny ahiahiny ny sehatra iraisam-pirenena
Araka izany, ahina hampirehitra ny afo izao fanoherana ny voka-pifidianana izao. Tsy mandeha ho azy rahateo izao fampitambaran-kery izao fa mety efa nifampierana tamin’ireo lehibeny avy : Ravalomanana, Andrianainarivelo Hajo, Rajoelina…
Etsy andaniny, efa maro ireo tsy faly amin’ny tranga sasany miseho eto amin’ny firenena : fako, fahasimban’ny lalana, « Iles Eparses », vidim-piainana…Mbola hanana ny ambarany koa ny sehatra iraisam-pirenena amin’izao fanitsakitsahana ny demokrasia izao ?